ဗဟုသုတများ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဗဟုသုတများ. Show all posts
ကဏ္ဍ ဗဟုသုတများ, အာကာသ-အကြောင်း
ကမ္ဘာပေါ်က တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဒြပ်စင်များ
ဒီဇိုင်း / ကျော်မျိုးထိုက် / ဧရာဝတီ
သေချာတာ ကတော့ ဘယ်လို ဒြပ်စင်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုး အကြီးဆုံး လဲလို့ မေးရင် ရွှေလို့ပဲ လူအများ စုက ဖြေမှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရွှေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ထွက်ရှိ သမျှ ဒြပ်စင်တွေ ထဲမှာ တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ဒြပ်စင် တခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ဟုတ်ပါရဲ့လား။ အခု ကျနော်က ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ဒြပ်စင်တွေကို ပြောပြ ချင်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ အခုချိန်ထိအောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖရန်စီယမ် တဂရမ်ပြည့်အောင် မတွေ့ရပါဘူး။ အကြောင်း ကတော့ ဒီ ဒြပ်စင်ရဲ့သက်တမ်းက မိနစ် ၅၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိလို့ပါ။ တူးဖော် လိုက်ပြီး မကြာခင်မှာ အငွေ့ပျံ သွားလို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ ခက်ပါ တယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ သေချာအောင် ထုတ်လုပ်မှ ရနိုင်ပြီး အက်တမ် ပေါင်း ၃ သိန်းခန့်နဲ့ ဖွဲ့စည်း ဖန်တီး ရပါတယ်။ တန်ဖိုး ကတော့ တစ်ဂရမ် ကိုတင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ လောက် ရှိပါတယ်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်က အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည် လေ့လာ ခန်းမှာ စတင် တွေ့ရှိခဲ့တာ ပါ။ အယ်ဖာ အမှုန်တွေကို ခွဲခြမ်းရင်း ကနေ ရပါတယ်။ ဘယ်မှာ သုံးတယ်ဆိုတာ သေချာ မသိ ရပေမယ့် တနှစ်ကို ကယ်လီ ဖိုနီယမ် ဂရမ် ဝက်လောက်ပဲ ထုတ်လုပ်နိုင်တာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ၁ ဂရမ်ကို ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကနေ ၂၇သန်း အတွင်း တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း ကာဗွန်တွေ အများ အပြား ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ ဂရပ်ဖို ကတွေမှာလည်း ကာ ဗွန်တွေ အများ အပြား ပါရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာဗွန် စစ်စစ် အနေအထား ဆိုရင်တော့ ဈေးအရမ်းကြီး ပါတယ်။ ဥပမာ စိန် လိုမျိုးပေါ့။ ၁ ဂရမ်ကို ဒေါ်လာ ၆၅၀၀၀ လောက် တန်ဖိုး ရှိနိုင်ပြီး ပုံမှန် ကာဗွန် စစ်စစ်ကတော့ ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ လောက်ပဲရှိ ပါတယ်။
နျူလက်နက်တွေနဲ့ နျူစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေမှာ သုံးပါတယ်။ 239 နဲ့ 241 ဆိုတဲ့ အဆင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိ ပါတယ်။ ကိုင်တွယ်လို့ မရပါဘူး။ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ အခန်းနဲ့ သယ်ဆောင် ဖန်တီး ယူရ ပါတယ်။ တစ်ဂရမ်ကို ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ လောက် ပေးမှ ရနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
အလူမီနမ် အလွိုင်းသားတွေကို အရည်အသွေး ပိုကောင်းစေတဲ့ ဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်မှာမှ စတင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့တာ ပါ။ တနှစ်ကို ၁၀ တန်လောက်ပဲ ကမ္ဘာမှာ ထွက်ရှိပြီး တဂရမ်ကို ဒေါ်လာ ၂၇၀ လောက် တန်ပါတယ်။
ရေနံ တူးဖော်မှုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ရေနံထွက် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် မှုတွေမှာ သုံးတာပါ။ ထွက်ရှိနှုန်း အလွန်ကို နည်း ပါးပါတယ်။ တူးဖော်လို့ ရနိုင်တဲ့ မြေနဲ့ ဒေသလည်း အလွန်ကို ရှားပါတယ်။ တစ်ဂရမ်ကို ၆၉ ဒေါ်လာ ရှိပါတယ်။
ငွေဖြူရောင် သတ္တုတမျိုးပါ။ ဓားနဲ့ ဖြတ်ရင်တောင် ရလောက်အောင် ပျော့ပါတယ်။ စတီရီယိုသုံး မီးသီးတွေ၊ ပရိုဂျက်တာ လို ပြသစက်တွေ၊ လျှပ်ကူး ကတ်သုတ်တွေ၊ အခြား အရည် အသွေးမြင့် လျှပ်စစ် ပစ္စည်းတွေမှာ သုံးပါတယ်။ ၁ ဂရမ်ကို ၆၄ ဒေါ် လာ ရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ပလက်တီနမ်အဖြစ်ပဲ လူသိများ ပါတယ်။ အရည်ပျော်မှတ် မြင့်မားတယ်၊ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာမှာ ရွှေဖြူ တန် ချိန် ရာဂဏန်း လောက်ပဲ တူးဖော် ရရှိ ပါတယ်။ ကျောက်မျက် ရတနာ တွေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ လက်ဝတ် ရတနာ အနေနဲ့ ဖြစ်စေ ဖန်တီးဝတ် ဆင်မှု များပါတယ်။ ကားတွေမှာရော၊ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှု မှာပါ အနည်းငယ် သုံးတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တဂရမ်ကို ဒေါ် လာ ၆၀ လောက် ရှိပါတယ်။
မော်တော်ကားတွေမှာ အများဆုံး အသုံးပြုပါတယ်။ လျှပ်ကူး ကွန်ဗက်တာ တွေထဲမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အပူချိန်၊ အခြေ အနေကြောင့် ဒြပ်စင် အသွင်ပြောင်းခြင်း ဖြစ်ပွားနှုန်း နည်းတာကြောင့် အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေ ဖြူထဲမှာ ကျောက်မျက်တွေ ထည့်ရင် အထိုင်သား မာအောင် သုံးပါတယ်။ ရွှေမှာ ကြေးရော သလို ရွှေဖြူမှာ ရိုဒီယမ်ရောတဲ့ သ ဘောပါ။ တဂရမ်ကို ၅၈ ဒေါ်လာခန့် ဈေးရှိ ပါတယ်။
မထင်မှတ်ဘဲ ကျနော်တို့ တန်ဖိုး အကြီးဆုံးလို့ ထင်ထားတဲ့ ရွှေက အဆင့် ၁၀ပဲ ရပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အများဆုံး တန်ဖိုးရှိ ဒြပ်စင် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရွှေချောင်း အဖြစ်နဲ့ရော လက်ဝတ် ရတနာ အဖြစ်ပါ ဖန်တီး အသုံးပြု ပါတယ်။ တဂရမ်ကို ၅၆ ဒေါ် လာ တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။
အဲကွန်းခြင်ထောင်နဲ့ ပူအိုက်တဲ့ညတွေကို ဖြတ်သန်းကြမယ်
မိုးရာသီလို့ ဆိုပေ မယ့်လည်း မိုးမရွာတဲ့ နေ့တွေမှာတော့ ပူစပ် ပူလောင်လိုလို ခံစားနေ ရတုန်းပါပဲ။ နွေရာသီ တုန်းကလဲ တချို့ညတွေ ပူလွန်းလို့ အိပ်မရတဲ့ ညတွေ ရှိကြ ပါလိမ့်မယ်။ ပူလွန်းတဲ့ ညတွေမှာ အဲကွန်း ရှိသူတွေက အဆင်ပြေနိုင် ပေမယ့် အဲကွန်း မရှိသူတွေ၊ တချို့အဲကွန်း တပ်ဖို့ အဆင်မပြေ သူတွေအနေနဲ့ တော်တော်ကို ဆိုးဝါးတဲ့ ညတွေ ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။
ရာသီဥတုက ပူ၊ ဒီကြားထဲ လူက တနေကုန် အလုပ်လုပ်ရ၊ ကျောင်းစာတွေကျက်ရနဲ့ ပင်ပန်းပြီး အိမ်ပြန် အိပ်ယာဝင်ချိန် အိပ်ယာထဲရောက်တာတောင် မအေးသေးတဲ့ ညတွေက တကယ်တော့ ဆိုးလွန်းလှပါတယ်။
ဒီလို ပူတဲ့ညတွေကို အေးအေးမြမြနဲ့ ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ နံရံအပေါက်ဖောက်စရာမလို၊ နေရာအကျယ်ကြီးမလိုပဲ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အဲကွန်းခြင်ထောင်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ချင်ပါတယ်။
သူက ခြင်ထောင်မှာ အဲကွန်းတပ်စရာ ပုံစံအပေါက် ပါဝင်ကာ အဲကွန်းကို ခြင်ထောင်မှာ တပါတည်း တပ်ဆင်ထားပြီး ခြင်ထောင်ထောင်လိုက်ရုံနဲ့ အဲကွန်းရဲ့အေးမြတဲ့အရသာကို ရရှိမှာပါ။
ဒီ အဲကွန်းတွေဟာ သာမန်အဲကွန်းတွေလို မီးအားအများကြီးမလိုဘဲ ဘတ္ထရီအိုးနဲ့ အသုံးပြုလိုပါက 500W အင်ဗာတာခံပြီး အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခြင်ထောင်မပါဘဲ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း ၁၅ ပေ ပတ်လည် တခန်းစာ အေးအောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ခြင်ထာင်ကိုဖြုတ်ပြီး အဲ့ကွန်းချည်း သက်သက် အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ တခြားအဲကွန်းတွေလိုပဲ ရေထွက်ပေါက်ပါတာမို့လို့ ပိုက်နဲ့ သွယ်ပြီးအပြင်ထုတ်ထားရမှာပါ။ အောက်တွင် ရေခွက်ခံထားလည်း ရပါတယ်။ ရေခဲတုံးထည့်ရတဲ့ air-cooler မဟုတ်ဘဲ air-con အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပရက်ဆာပါတဲ့ အဲ့ကွန်း၊ ရေခဲသေတ္တာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဝယ်လာပြီး အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း တန်းမဖွင့်ဘဲ ၁၅ မိနစ်ခန့် အငြိမ်ထား နေရာချပြီးမှ ဖွင့်ရပါမယ်။ ကွန်ပရက်ဆာထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ ဆီများ နေသားတကျမဖြစ်သေးချိန် ဖွင့်မိပါက ပိုက်လိုင်းများထဲသို့ အဆိုပါ ဆီများဝင်ရောက်ပြီး အအေးဓာတ် နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
“ပစ္စည်းက တရုတ်က လာတာပါ။ တခြားအဲကွန်းတွေနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ သူကတော့ နံရံတွေဘာတွေမလိုဘဲ ခြင်ထောင်ထဲမှာ ဒီတိုင်း တပ်ထားရုံနဲ့ အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ မီးအားအတက်အကျမှာတော့ နည်းနည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း safe guard နဲ့ သုံးရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဘာမှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါဘူး” လို့ Lai Lai electronic store မှ ကိုမင်းမင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဈေးနှုန်းက တယောက်အိပ်ကို ၂၃၀၀၀၀ ကျပ်၊ နှစ်ယောက်အိပ်ကို ၂၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အဲကွန်းလေးတွေကို အွန်လိုင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှတ်(125)B1၊ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိလမ်း၊ ကြည်စုရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ နန်းထိုက် အီလက်ထရောနစ် စတိုးမှာလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/06/09/116027.html
" တပည့်တော်တို ရန်ကုန် ကတောင် လာဖူး ရတာပါ ဘုရား..." ဟု အစချီလျက် ဟောဒါက ဘာလေးပါ ဘုရား၊ ညာလေးပါဘုရား၊ နိုင်ငံခြားက တပည့်တော်သား၊ သမီး ပို့လိုက်တဲ့ ရှားရှား ပါးပါး အသုံး အဆောင် လေးပါ ဘုရား၊ မေတ္တာပို့ပေး ပါဦးဘုရား စသည်ဖြင့် ဖွဲ့ဖွဲ့ နွဲ့နွဲ့ လျှောက်ထား လာသူများအား
"ဟောဗျာ၊ ရန်ကုန်မှာ သံဃာမရှိတာ ကျလို့ဗျား၊
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ဆွမ်းလာရပ်တဲ့ သံဃာ လှူလိုက်တော့ကော ကုသိုလ် မရလို့လားဗျ....
အင်၊ ခင်ဗျားတို့ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့သာ လှူနေရင် ငါစွဲ၊ ငါ့ပစ္စည်းစွဲ ဆိုတဲ့ တဏှာမာန ဒိဋ္ဌိတွေက ဘယ်တော့ လွတ်မတုန်းဗျ။ ငါတော့ ဘယ်ဆရာတော် ကြီးကို ဘာလှူ လိုက်ရတာ ဆိုတဲ့ စွဲစိတ်တွေ၊ ပျော်စိတ်တွေ၊ ဒီလိုလှူလိုက်ရလို့ နောင်ဘဝကျ၊ ငါဘာဖြစ်မှာ ဆိုတဲ့ အမျှော်စိတ်တွေနဲ့ လှူနေသမျှ ခင်ဗျားတို့ ဒါနအကျိုးပေး မစင်ကြယ်သေး ဘူးလို့ မှတ်ဗျာ...။
အကျိုးပေးမှ မစင်ကြယ်သေးရင် မဂ်ဖိုလ်နိမ္ဗာန်ဆိုတာ ဝေးသေးဗျ။ ပြီးတော့ တို့ကို တစ်ကျပ်ဖိုး အထင်ကြီးရင် တခြားသံဃာကို တစ်ကျပ်ဖိုး အထင်သေး သလို့ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သဘောကိုရော ဆင်ခြင် မိကြရဲ့လာဗျာ...။ ဟုတ်ဗျား...။
သံဃာဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ အမြင်တူ အကျင်တူလို့ သံဃာခေါ်တာဗျ...။
ဟာ...ဘယ်သံဃာတော့ဖြင့် ကြည်ညိုစရာမကောင်းလို့ မလှူဘူးမလုပ်ပါနဲ့...။ မကောင်းတာ သူ့အပိုင်း၊ သူ့အပြစ်သူခံလိမ့်မယ်...။ ခင်ဗျားတို့ကောင်းတာလုပ် ကောင်းတာဖြစ်မှပေါ့....။
ဟုတ်ဗျား လှူတတ်မယ်ဆိုရင် ဆွမ်းကလေးတစ်ဇွန်းနဲ့လည်း တစ်ပြည်လုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကသံဃာတွေကို လှူလို့ရပါတယ်ဗျ၊ သံဃာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဒီနေ့မှ ရှင်ဖြစ်တဲ့သံဃာကနေ ဘုရားရဟန္တာတွေအထိ အကုန်ပါတယ်ဗျ၊ တို့ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဒီနေ့မှ စစ်ထဲဝင်တဲ့ ရဲဘော်အသစ်ကနေ ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအထိကို စစ်တပ်လို့ခေါ်သလိုပေါ့...။
သံဃာလည်း ဒီနေ့မှ သင်္ကန်းစဝတ်သူကနေ ဘုရားရဟန္တာတွေအထိဆိုတော့ နည်းသလားဗျ...။ သက်တော်ထင်ရှားတွေရော၊ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတဲ့ ဘုရားရဟန္တာတွေရော အားလုံးအကျုံးဝင်တယ်ဗျ...၊
ဒါ့ကြောင့် လှူတတ်မယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်းကင်းနဲ့သာလှူ၊ အိမ်ရှေ့ဆွမ်းရပ်တဲ့ ကိုယ်တော်သပိတ်ထဲ ဆွမ်းလေးတစ်ဇွန်းလောင်းပြီး သံဃာ့ဂုဏ်များ အာရုံပြုနေရင်ဗျာ နိဗ္ဗာန်မှာ စံတော်မူနေတဲ့ ဘုရားရဟန္တာပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင်ထိ လှူပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ....။
ဒါနပြုတယ်ဆိုတာ ငါစွဲဖြုတ်နေတာ ငါပိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို စွန့်လွှတ်ပေးလှူပစ်တာ၊ လိုချင်မှု သိမ်းပိုက်မှုဆိုတဲ့ တဏှာလောဘတွေကို ဒါနနဲ့ခွာချနေတာ၊ ရင်ဝမှာစူးနေတဲ့လှံကို ဆွဲနုတ်ပစ်လိုက်တာ ငါ ဒီလို အလှူကြီး လှူလိုက်လို့ နောင်ဘဝ ဘယ်လိုကောင်းစား ဦးမှာဆိုတဲ့ အမျှော်စိတ်နဲ့ လှူနေရင် နောက်ထပ် စိုက်ဝင် စူးဝင်လာမယ် လှံတွေကို ရင်ကော့ပြီး ခံနေသလိုဖြစ်မှာပေါ့...။
ငါးကြီးကြီးလိုချင်လို့ ငါးသေးသေးကို ငါးစာလုပ်မျှားချိတ်မှာ တပ်မျှားသလို ဖြစ်မှာပေါ့....။ ဒီလိုအလှူမျိုးလှူတိုင်း မကောင်းဘူး။ ကုသိုလ်လိုချင်လို့လုပ်တာ အကုသိုလ်ပဲများမယ်...၊
ကျောင်းကြီးဆောက်လှူပါရဲ့၊ ငါ့ကျောင်းလို့စွဲနေရင် ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ်ပြန်စောင့်ရလိမ့်မယ်...။ ဘုရားတည်ပြီး ဘုရားဒကာဘွဲ့ထူကြီးတော့ ခံယူပါရဲ့၊ ငါ့ဘုရားလို့စွဲနေရင် အဲဒီဘုရား ပြန်စောင့်နေရလိမ့်မယ်...။ ငါ့ဆရာတော်လို့စွဲနေရင် ဆရာတော့်ကျောင်းနား ပြိတ္တာကြီးလာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ....။
တို့ကျောင်းနားလာကပ်လို့ကတော့ ကျောက်ခဲပရိတ်မန်းပြီး ထုလွှတ်မှာဗျနော်....၊ ဟုတ်လား...။
လဲတယ်ဆိုတာ သူတကာခြေထိုးလို့ လဲတာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ပုဆိုးစ ကိုယ်တက်နင်းမိလို့ လဲကြတာဗျ...။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှ လှူသလားဗျာ၊ လူဖြစ်မှ လှူကြသလားဗျာ၊ တိရစ္ဆာန်တွေရော၊ ဘာသာခြားတွေရော ဒါနပြုနေကြတာပါပဲ။
ဟော...ခွေးအိုမကြီးဗျာ၊ သူ့သားသမီးတွေ နို့တိုက်ကျွေးမွေးလို့ ဒါနမပြုဘူးလားဗျာ။ ဒီခွေးမကြီးအလှူကမှာ ဘာမျှော်စိတ်မှ မရှိလို့ မေတ္တာစစ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပေးကျွေးတဲ့ ဒါနဖြစ်လို့ မြတ်သေးဗျာ၊
တို့လူတွေများ အလှူလေးလုပ်ပြီးတာနဲ့ တောင်းလိုက်တဲ့ဆု၊ ဒီဘဝ ဘာဖြစ်ရပါစေ၊ နောက်ဘဝ ဘာဖြစ်ရပါစေနဲ့ နိဗ္ဗာန်က နောက်ဆုံးမှပါဗျာ....။ ဟော....ဒိပြင်ဘာသာဝင်တွေလည်း လှူတာကောင်းမှန်သိလို့ လှူနေကြတာပါပဲ၊ ဒါနခင်းချဉ်းကပ်မိတာပါပဲ...။
ဒါပေမဲ့ ငါ, ငါစွဲအတ္တ၊ ပစ္စည်းမာန၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေရှိနေသမျှ ပါရမီမြောက်တဲ့ဒါန မဖြစ်ဘူး၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းအစား တစ်ဖန်ပြန်လည်ရယူရေးကို ဦးတည်နေလို့ ပါရမီဆိုတဲ့စကားနဲ့တော့ ဖီလာကန့်လန့်ချည်းပဲ...။
ပါရမီဒါနဆိုတာ လှူဆဲကာလ ဉာဏ်ယှဉ်ပါမှဗျ...။ အဲဒီတော့ ငါစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ပစ္စည်းစွဲတွေအစား ငါလည်းမမြဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြဲလို့ ဆင်ခြင်ပြီးလှူနိုင်ပါမှ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဗျ....။ ။
"ကြည့်သောသူသည် မြင်၍ မြင်သောသူသည် ဆင်ခြင်၏..."
Originally published at - hthttps://www.facebook.com/ဓမ္မရတနာ
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 12, 2016 No comments:
ကမ္ဘာ့မြေကြီး အောက်ရှိ ကျောက်လွှာများ ရုတ်တရက် ကျိုးပြတ်ရွေ့လျား မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော မြေသားများ ပြင်းထန်စွာ တုန်ခါခြင်းကို မြေငလျင် လှုပ်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။
မြေအောက်ကျောက်လွှာများ လှုပ်ရှားမှု (အဖြစ် အများဆုံး၊ အပြင်းထန်ဆုံး၊ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံး)
မီးတောင် ပေါက်ကွဲ ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့မြေထု ချပ်ကြီးများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု တွန်းကန်မှု (သို့) ကျွံကျ နိမ့်ဆင်းမှု (ဖျက်ဆီးအား ပြင်ထန်လေ့ မရှိ)၊ ဖေါက်ခွဲမှု ကဲ့သို့သော ပေါက်ကွဲ အား ပြင်းထန်သည့် လူတို့ လုပ်ဆောင်မှု
ဟိမ၀န္တာတောင်တန်း ငလျင်ရပ်ဝန်းဒေသနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ဘေး ဖြစ်ပွားစေသော ငလျင် ကြောများမှာ-
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအို အနီးမှ စတင်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်း အတိုင်း ဆက်ဆင်း လာ၍ စစ်တောင်း မြစ်ဝှမ်းကို ဖြတ်ပြီးနောက် မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း ၀င်ရောက်သွားသည့် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးဝ အနီး တောင် မြောက်တန်းလျက် တည်နေသည့် ကဘော်ပြတ်ရွေ့
ပြင်ဦးလွင် အနီးမှ စတင်၍ တောင်ကြီးမြို့ အနီးတိုင် တောင်မြောက် တန်းလျှက် တည်နေသည့် ကျောက်ကြမ်းပြတ်ရွေ့
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း အရှေ့၊ အနောက် တန်းလျက် တည်နေသည့် မိုးမိတ် ပြတ်ရွေ့
ငလျင်ဘေး အန္တရာယ် ဆိုးဆိုး ၀ါးဝါးကြုံတွေ့နိုင်သော ဒေသများမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း aဒသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ငလျင် အရှိန်တုံ့ပြန် ကျရောက်မှုသည် အထပ်နိမ့် များတွင် ပိုမိုများပါသည်။ အုတ်၊ အုတ်ညှပ်၊ ကွန်ကရစ်တို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်သော အထပ်နိမ့် အပါအ၀င် အဆောက်အဦး အားလုံး ငလျင်ဘေး အန္တရာယ် လျော့ပါးစေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထာားရန် အထူး လိုအပ်ပါသည်။
အထပ်နိမ့်၊ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦး များအားလုံး စနစ် တကျ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးအဖြင့် လူဦးရေ ထူထပ်သည့် မြို့တော်ကြီးများသည် ငလျင်ဘေး အန္တရာယ် လျော့ပါးစေရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားရမည့် နေရာဒေသများ ဖြစ်ကြပါသည်။
အဆောက်အဦးများ၊ အခြေခံ အဆောက်အဦးများ ပြိုကျ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် သေကြေ ပျက်စီးမှု ကြီးမားစေနိုင်ပါသည်။
မီးလောင်ခြင်း၊ တာတမံများကျိုးပေါက်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းတို့ jဖစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ရေလွှမ်း ခံရသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် မိလ္လာ စနစ် ထိခိုက်ပျက်ပြားခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်သည်။
မြေအောက်ရေများ၊ ငလျင်အရှိန်ကြောင့် ရေဖိအား များဖြင့်တက်ပြီး မြေပြင်မှရေများ၊ သဲများ ပန်းထွက်ခြင်း၊ ရေတွင်းများ ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ငလျင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင် သတင်းအချက် အလက်များမရနိုင်ခြင်း၊ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း။
ငလျင်ဖြစ်ပေါ်ရာ နယ်မြေများတွင် လူနေထူထပ်ပြီးအဆောက်အဦးများ သိပ်သည်းစွာ တည်ဆောက်ထားခြင်း။
ငလျင်ဒဏ်ကို မခံနိုင်သောအဆောက်အဦးများတွင် နေထိုင်ခြင်း။
ငလျင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများသိရှိမှု နည်းပါးခြင်း။
ငလျင်မည်သည့် အချိန်တွင်ဖြစ်မည်ကို ကြိုတင်သိနိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် ဒေသအလိုက် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင် ရည်ရှိမည့် အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ပါ။
ပင်လယ်ဒီလှိုင်း(ဆူနာမီ) ကျရောက်တတ်သည့် နေရာများနှင့် မြေသားမခိုင်မာသည့်နေရာများတွင် အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်း မပြုရန်၊
ပြိုကျနိုင်သော သက်တမ်းလွန် အဆောက်အဦးများကို ဖယ်ရှားပါ (သို့) ခိုင်ခန့်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။
ငလျင်လှုပ်စဉ် စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာ ထားပြီး ပြိုကျနိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများ၊ အဆောက်အဦးများ အနီးမှ အမြန်ဆုံး ရှောင်ရှားပါ၊
အိမ်ထဲတွင် ရှိနေပါက ကုတင်၊စားပွဲ ခုံအောက် ၀င်နေပါ၊ ကုတင်၊ စားပွဲများ မရှိလျှင် အဆောက်အဦး၏ အတွင်းနံရံတလျှောက်(သို့) ထောင့်တစ်ခုခုတွင် အကာကွယ်ယူပါ။
ငလျင်လှုပ်နေစဉ် အိမ်အပြင် မထွက်ပါနှင့်၊
အိပ်ယာထဲရောက်နေပါက ခေါင်းကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ထားပြီး ကာကွယ်ပါ။
အထပ်မြင့်တိုက်တွင် ရှိနေပါက ပြတင်းပေါက်၊၀ရံတာနှင့် ဝေးဝေးနေပါ။
မြေညီထပ်တွင်ရှိနေပြီး ၀င်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်နှင့် နီးပါက အဆောက်အဦးအတွင်း မနေဘဲ အပြင်ဘက်သို့ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာရှောင်ရှားပါ။
အဆောက်အဦးကို စွန့်ခွာရမည်ဆိုလျှင် ဓါတ်လှေကားအတွင်း ပိတ်မိနိုင်သဖြင့် ရိုးရိုးလှေကားမှသာ ဆင်းပါ၊
အိမ်အပြင်ရောက်နေပါက အပြင်မှာမှာပဲဆက်နေပါ၊ အဆောက်အဦး၊ သစ်ပင်၊ မီးတိုင်၊ ဓါတ်ကြိုးများနှင့် ကင်းလွတ်ရာတွင် နေပါ။ မြေပြင်မှာ ၀ပ်နေပါ။
ကားထဲတွင်ရှိနေပါက ကားကိုအရှိန်လျှော့ပြီး ဘေးကင်းမည့် နေရာကို မောင်းသွားပြီး ရပ်ထားပါ။ ကားထဲမှာပဲနေပါ။
ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ မြစ်ကမ်းစပ်တွင် နေထိုင်သူများ ဖြစ်ပါက မြေပြင်တောင်ကုန်းရှိရာနေရာသို့ အမြန်ဆုံးသွားပါ။
လျှပ်စစ်ဓါတ်ကြိုးများနှင့် ကွဲရှထိခိုက်နိုင်မည့်အရာများကို သတိထား ရှောင်းရှားပါ။
မိသားစုများ တကွဲတပြားဖြစ် သွားနိုင်ပါက ပြန်ဆုံရမည့်နေရာကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါ။
အင်အားကြီးသည့် ငလျင်လှုပ်ပြီးတိုင်း နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ လှုပ်တတ်သဖြင့် နောက်ထပ်ငလျင် ဆက်မလှုပ်မီ အဆောက်အဦး အပြင်ဘက်သို့ အမြန်ဆုံး ပြေးထွက်ပါ။
ကွင်းပြင်၊ ကွက်လပ်၊ လယ်ကွင်းစသည့် နေရာများတွင် ခေတ္တယာယီနေပါ။
ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် အချို့ကမ်းခြေဒေသများတွင် ပင်လယ် ဒီလှိုင်းကြီးများ တက်လာခြင်း၊ ရေကာတာ နှင့် ဆည်များ ပြိုကျခြင်း၊ တောင်ပြို ကျခြင်းတို့ ကြောင့် ရေကြီး aရလျှံခြင်းများ ဖြစ်တတ် သဖြင့် မြေမြင့် ပိုင်းသို့ ကြိုတင်ရှောင်ရှားပါ။
ဒဏ်ရာရနေသူများ၊ လှောင်ပိတ်မိနေသူများကို ကူညီပြီး ရှေးဦးပြုစုပါ၊
ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ မကျန်းမာသူများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကို ဦးစားပေးကယ်တင်ပါ၊
အပျက်အစီးအောက်တွင် ပိတ်မိနေပါက မီးခြစ်ကို မသုံးပါနှင့်၊ မီးလောင်နိုင်ပါသည်။
Original link - http://mizzimaburmese.com/article/7741
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 23, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ဗဟုသုတများ, သဘာဝဘေးအန္တရယ်များ
ပယင်း အတု အစစ် >> စစ်နည်း ၁၀ ချက်
1.Floating Test or Salt water Test (ဆားရည်ဖြင့် စမ်းခြင်း)
စမ်းသပ် လိုသော ပယင်းကို .. (အထည်ဖြစ်ပါက အထည်မှ ဖြုတ်ပါ) ဆားရည်တွင် စိမ်ပါ..
ထိုအခါ ပယင်းသည် ဆားရည်ပေါ်တွင် ပေါလောပေါ်ရမည်..
ပယင်းသည် ရေချိန်သိပ်သည်းဆ (Specific gravity) 1.04 ရှိတယ်
ရေချိန် သိပ်သည်းဆသည် 1 အတိ ရှိပါတယ်..
ရေ တစ်ဖန်ခွက်ကို ဆား tea spoon (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ၇ ဇွန်း ဖြင့် ပြည့်ဝ ဆားပျော်ရည် ပြုလုပ်သော် .. သိပ်သည်း ဆသည် 1.1ဖြစ်လာ ပါသည်
ထို့ကြောင့် ဆားရည်ပေါ်တွင် ပယင်းမပေါ်နိုင်ပါ ..
မှတ်ချက် .. ယင်စမ်းသပ်မှုမှာ ၁၀၀ % မသေချာသေးပါ .. pressed amber သည်လည်း ဆားရည်တွင် ပေါ်ပါသည်။
Press amber ဆိုသည်မှာ ကွဲအက်နာ များဖြင့် (ရောင်းပန်းမလှ) ပယင်း အစစ်ကို ဓါတုဗေဒ နည်းဖြင့် ဖိသိပ်ပြီး သဘာဝ ပယင်းကဲ့သို့ ပြန်လည် ပြုပြင်ထားခြင်း
Press amber နဲ့ natural amber ကို ခွဲနိုင်ရန် အပ် (သို့) အခြား .. နီရဲအောင် မီးကင်ပြီး ပယင်းကို ထိုးကြည့်ပါ အစစ်ဆိုရင် ထင်းရှူးနံ့ (သို့) ချယ်ရီ (သို့) သစ်သားနံ ထွက်ပါမည်.. အတုဆိုရင် ပလစ်စတစ် ညော်နံ့ ၀ါယာ ညော်နံ့ ထွက်ပါမယ်။
ပျက်စီးမှု အနည်းအများ ရှိနိုင်သည့် အတွက် စမ်းသပ်ရန် မသင့်တော်ပါ ...
၂ . ရေနွေးပူဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း
ပယင်းကို ရေနွေးပူဖြင့် စိမ်ပီး အနံ့ခံကြည့်လျှင်
အစစ်ဆိုလျှင် = သစ်မွှေးနံ့ ရမယ်၊ ချယ်ရီသားနံ့ ထင်းရှူးနံ့
အတုဆိုလျှင် = ကာဘော်လစ်နံ့ ၊ ညော်နံ၊
မှတ်ချက် - ပယင်းသည် ရေနွေးစိမ် ခံပါတယ် ..
ပြချက် - ပယင်းသည် အပူချိန် 200°C to 300° C ရှိပြီး ရေနွေးသည် 100°C မျှသာ ရှိပါတယ် .. ဒီထက် များသွားရင် အငွေ့ပျံသွား ပါတယ်။
၃. လက်သည်း ဖျက်ဆေးကို ၀ါဂွမ်းမှာ တို့ပြီး ပယင်းကို ခပ်နာနာ ပွတ်ကြည့်ပါ ..
ပယင်း စစ်လျှင် မည်သို့မျှ မထူးခြားပါ ..
ပယင်းအတု ဆိုလျှင် (Copal . plastic) များဆိုလျှင် ၀ါဂွမ်းတွင် စေးကပ်ကပ် ဖြစ်ကာ အစေးများ ကပ်ပါလိမ့်မယ်
မှတ်ချက် - ဖန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပယင်း ဆိုလျှင် သည်နည်းဖြင့် မစမ်းနိုင်ပါ
၄ အပ် သို့မဟုတ် ဓါးဦးချွန် ဖြင့် အနည်းငယ်ခြစ်ကြည့်ပါ ..
ပယင်းစစ်လျှင် .. အမှုန့်များ လွယ်ကူစွာကျလာပါလိမ့်မယ် .. အစလေးတွေ ပဲ့ကျပါလိမ့်မယ် ..
ပလတ်စတစ် ဆိုလျှင်.. ငြိနေလိမ့်မယ် .. အစအန အမှုန့် များလည်း လျောလျော ရှုရှု မကျနိုင်ပါ
ဖန် ဆိုလျှင် အပ်.. ဓါးဦး မတိုးပါ။
မှတ်ချက် - Copel အား မစစ်နိုင်ပါ .. မပေါ်ပါ
၅. rubbing test. .
ပယင်း ကို ချည်ထည် သိုးမွှေး တို့ဖြင်နာနာပွတ်ပါ . .
electro meganetic field ( negative) ထွက်လို့ ပေါ့ပါးတဲ့ ဆံပင် ဌက်မွှေး စက္ကူ အပိုင်းအစ လေးများ
ကို ဆွဲငင် တယ် . .plastic . .ဖန် . .မဆွဲငင်ပါ.
ဒါကတော့ အတွေ့ အကြုံ ရှိမှပါ . .ပယင်းကို အနံ့ မပါသော ဆပ်ပြာဖြင့် ရေစင်အောင် ဆေးပါ . . လျှာဖျားလေးနဲ့တို့ကြည့် ချယ်ရီသား အရသာ . . ထင်းရှူး အရသာ ခံစားမိမယ် . .plastic . .ဖန် . .မရှိပါ . .
မှတ်ချက် - copal စမ်းမရပါ.. မပေါ်ပါ
ထိုနည်း၎င်း ပဲရှူကြည့် . . ချယ်ရီိ ထင်းရှူးနံ့ ရမယ်...
၈ touch !
ပယင်းဟာ နွေးတဲ့ အထိအတွေ့ ရှိပါတယ် . .plastic . .ဖန် မရှိပါ . .
မှတ်ချက် - copal စမ်းမရပါ
ပယင်း ဟာ short wave ultraviolet ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည် နဲ့ စမ်းရင် glow ခေါ် မီးစုန်း တောက်ပါတယ် ဖန် နဲ့ ပလပ်စတစ် ကတော့ မပြပါ . .
Ambriod နှင့် copal မှာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း glow ပြပါတယ် . . . မပေါ်ပါ ..
10. ဆားပြည့်ဝ ပျော်ရည်မှာ စိမ်
အထက်၌ ဖော်ပြပြီး . . .
ရည်ရွယ်ချက် ။ ၊၊ မြန်မာ့ပယင်း အား အတုအစစ် ခွဲခြား တတ်စေရန် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အား လက်လမ်းမှီ သလောက် ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်း မျှသာ ဖြစ်ပါသည်..
အထက်ပါ အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီမှသာ တန်ဖိုးမြင့်မားသော .. ပယင်းရတနာကို ၀ယ်ယူရန် တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချူပ်ပါသည်။
မူရင်း ရေးသားသူ ကိုညီညီနိုင်
Original link - https://www.facebook.com/groups/HPONEMOEEINT/permalink/734889989948660/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, September 29, 2015 1 comment:
တရုတ်အရက်ဖြူ Baiju ၌ ကာမ အားတိုးဆေးများ ပါဝင်၍ FDSမှ တားမြစ်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံသည် လွန်လေပြီး သောနှစ်ပေါင်း များစွာ ကပင် ကာမ အားတိုးဆေး များအား တိရိစ္ဆာန်များ ၏ လိင် အင်္ဂါများမှ ထုတ်လုပ် သုံးစွဲခဲ့ ကြသည်။
ယခုခေတ် ကာလ၌ တရုတ် ဥပဒေက အစား အသောက် များတွင် ကာမ အားတိုးဆေးများ ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်းအား တားမြစ် ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ယင်းကဲ့သို့ တည့်သွင်း အသုံးပြု မှုများမှာ အလျဉ်းသင့် သလို လုပ်ဆောင် ကြဆဲ ဖြစ်သည်။
တရုတ် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဌာနမှာLiuzhou ရှိ စက်ရုံနှစ်ရုံတွင် ၎င်းင်းတို့၏ ထုတ်ကုန် များ၌ှSildenafil နှင့် tadalafil ကဲ့သို့ ကာမအား တိုးဆေးများ ထည့်သွင်း သုံးလျက်ရှိ ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
FDA မှ ၎င်းင်းတို့၏ ယမကာ ပုလင်းပေါင်း များစွာအား ပန်းသေပန်းညှိုးတွင် သုံးသော ကာမအားဆေး Viagra များ ပါဝင်သည့် အတွက် သိမ်းဆည်း ခဲ့သည်။
၎င်းင်းတို့၏ ထုတ်ကုန် Baiju မှာ အရက်ဖြူ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အရက် ပြင်းအား ပမာဏ များပြားကာ ကွန်ဖူး အရက်၊ အသက်ရှည်ဆေး စသဖြင့် အမည် အမျိုးမျိုးပေးကာ
ရောင်းချ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Original link - https://www.facebook.com/HealthUpdatesJournal
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေးသတင်း, ဗဟုသုတများ
အပင်မှရရှိသော ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ကလေးများ
နွယ်မြက် သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်ဟု ဆိုသော်လည်း လောက နိယာမ သဘော အရ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ကတော့ အမြဲ ဒွန်တွဲလျက် ရှိနေကြ စမြဲပါ။ တချို့သစ်ပင်တွေမှာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး အတွက် အားသာချက်တွေ တော်တော် များများ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကြံ့ခိုင်မှု စွမ်းရည်ချင်း မတူညီ ကြတာကြောင့် ၎င်း အပင်တွေရဲ့ ဆေးဝါး များဟာ ကိုယ်ထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးသား စနစ်နဲ့အပြောင်း အလဲကို ဖြစ်စေ တတ်တာကြောင့် သတိပြု သုံးစွဲတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့ပါ၍ သတ်မှတ်
ဖော်ညွှန်း ထားသော ပမာဏထက် ပို၍ မမှီဝဲ မသုံးစွဲ သင့်ကြောင်း အောက်ပါ အတိုင်း အသိပေး မျှဝေ လိုက်ရပါတယ်။
(က) ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်၏ ဂျယ်လီ(အနှစ်)ထဲတွင်ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တစ်မျိုးက အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်များကို အလိုလိုပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် မီးလောင်နာ၊ အရေကြည်ဖုနာ၊ ထိခိုက်ရှနာ၊ နေလောင် ဒဏ်ရာတို့ကို ကောင်းစွာကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခွဲစိတ်အနာ ချုပ်ရိုးများကိုတော့ အနာကောင်းစွာမကျက်သေးခင်မှာ မလိမ်းသင့်ပါဘူး။ အနာကျက်နှေးသွားစေပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူဟာ ဟင်းလျာ အစားအစာများ အတွက် အဓိက ကျသော ဆေးဖက်ဝင် ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
(က) ကြက်သွန်ဖြူဟာ သွေးကျဲစေ တာကြောင့် သွေးမခဲဆေး စားနေရ သူများဟာ ခွဲစိပ်ကုသမှု မပြုမှီ ကြက်သွန်ဖြူကို မစားသင့်ပါဘူး။
(ခ) Hypoglyceamic (ခေါ်) သွေးထဲမှာ ဂလူးကို့စ် နည်း၍ ဆေးစားနေ ရသူများ ဟာ ကြက်သွန်ဖြူကို လုံးဝ မစားသင့်ပါဘူး။
ငရုတ်ကောင်းက ပန်းနာ၊ သလိပ်၊ လေထိုး လေအောင့် တို့ကို ချေဖျက် ပေးနိုင်သလို သည်းခြေရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ချွေးမထွက်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ သွေးဆုတ် သွေးပုပ် အတွင်း ပူသော အနာတို့ ကိုလည်း သက်သာဖြေလျော့ ပေးနိုင် ပါတယ်။
(က) ငရုတ်ကောင်းကို နေ့စဉ် ၃ဝဝ မီလီဂရမ်ထက် ပို၍ မစားသင့်ပေ။
(ဃ) ငရုတ်ကောင်းဟာ ကြွက်သားတွေကို ပျော့ပျောင်း နိုင်စွမ်းရှိတာ ကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူများနှင့် စက်ကိရိယာ ကိုင်တွယ်ရ သူများဟာလည်း ငရုတ်ကောင်း မစားသင့်ပါဘူး။
နွယ်ချိုက အသံကိုကြည်လင်စေပြီး ချောင်းဆိုးနဲ့ သလိပ်နာရောဂါကို ပျောက်စေ ပါတယ်။ လေနာရောဂါကို နိုင်ပါတယ်။ လူကို ဆူဖြိုးစေပြီး အားဖြစ်စေပါတယ်။
(က) နွယ်ချိုကို ရက်သတ္တ ၄-၆ ပတ်ထက် ပို၍ စွဲမစား သင့်ပါဘူး။ ပို၍ စားမိပါက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေအောင်း နိုင်ပါတယ်။
(ခ) ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူများ အထူးရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။
(ဂ) နွယ်ချိုဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ကို လျော့ နည်းစေ တာကြောင့် ပိုတက်စီယမ် အားနည်း သူများ မစား သင့်ပါဘူး။
တရုတ်နံနံပင် ထဲမှာ ဘေးဥပဒ် ဖြစ်စေသော ကိုလက်စထရော လုံးဝ မပါရှိဘဲ ကောင်းကျိုး ပြုသော ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ပစ္စည်းများ၊ ဗီတာမင် သတ္တု ဓာတ်များနဲ့ ချေဖျက် လွယ်သော အမျှင်ဓာတ်တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိတဲ့ အပြင် ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်သော acetylenics, phenolic acids နှင့်coumarins ဓာတ်ပေါင်းစုများ ပါဝင်နေ တာကြောင့် ကင်ဆာ အဖု အကျိတ်များ ကြီးထွား ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အံ့သြဖွယ် ကောင်းစွာ အနာများ ကိုလည်း ကျက်စေ ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာ၊ အစာ အိမ်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာနှင့် အမျိုးသားများ ဆီးကျိတ် ကင်ဆာတို့ကို ဟန့်တားပေး နိုင်ပါတယ်။
တရုတ်နံနံပင်က ဆေးအဖြစ် မှီဝဲရင် ဆီးများများ သွား စေ တာကြောင့် ကျောက်ကပ် ရောဂါသည်များနဲ့ သည်း ခြေအိတ်ဝေဒနာ သည်များ အတွက် အထူး ရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။
ပင်စိမ်း ရွက်ထဲတွင် ပါရှိသော သဘာဝ ဓာတ်ပေါင်းစု တစ်မျိုးက ဦးနှောက် စွမ်းဆောင်ချက်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေသည့် အပြင် စိတ်ဓာတ် ကျခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်းနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါ တို့ကို ထိထိ ရောက်ရောက် ကုသပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ပင်စိမ်းရွက်တာ ကလေးငယ်များ ရဲ့ ဥာဏ်ရည် စွမ်းအားကို တိုးတက် မြင့်မားစေနိုင်လို့ အရွယ် သုံးပါး မရွေး စားသုံး သင့်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာ ဂလူးကို့စ် နည်းနေသူများ၊ အတက် ရောဂါရှိသူများနဲ့ ဝက်ရူးပြန် ရောဂါရှိသူများ ကတော့ ပင်စိမ်းကို မစားသင့် ပါဘူး။
(၈) ချင်း (ဂျင်း)
ချင်းဟာ အစာကြေညက် လွယ်ခြင်း၊ ဆီးနဲ့ ဝမ်းကို ရွှင်စေခြင်း၊ ခံတွင်း မြိန်ခြင်း၊ သုက်ကို ပွားစေခြင်း၊ အဆိပ် အတောက်ကို ပြေပျောက် စေခြင်း၊ ချောင်းဆိုး ပန်းနာကို ပျောက်စေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းနာ များကို ပျောက်ကင်းခြင်း၊ အသံကြည်လင်ခြင်း၊ လေနာ ရောဂါကို နိုင်ခြင်းစတဲ့ ကျန်းမာရေး အာနိသင်တွေ ပေးစွမ်းနိုင် ပါတယ်။
ချင်းဟာ သည်းခြေရည်ကို ပိုထွက် စေတာကြောင့် သည်းခြေ ရောဂါ ရှိသူများက ချင်းအခြောက်ကို ဖြစ်စေ၊ ချင်းမှုန့်ကို ဖြစ်စေ ဆေးအဖြစ် မှီဝဲလိုရင် ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန် တို့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သာ သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
လေ့လာ ဆန်းစစ်မှု မှတ်တမ်းများ အရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နနွင်းမှုန့် အစားဆုံး သူများဟာ အိန္ဒိယ လူမျိုးများ ဖြစ်ကြရာ ၎င်း လူမျိုးတွေမှာ ရင်သား ကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီး ကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ လွန်စွာနည်းပါး ကြောင်း၊ နနွင်းမှုန့်ကို ပန်းဂေါ်ဖီ(အဖြူ)နှင့် တွဲဖက်၍ ချက်စားခြင်းက ဆီးကျိတ် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေး
နိုင်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယမှာ နနွင်းမှုန့်ကို မိရိုးဖလာ အရ စားသုံး လာခဲ့ကြ တာကြောင့်လည်း ကလေးငယ် တွေမှာ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်း နည်းပါးကြောင်း၊ အဆိပ် အတောက်
ပြေစေကာ အသည်းကို ကောင်းကျိုးပြုကြောင်း၊ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ ရောင်ရမ်းနာများ အတွက် လွန်စွာဆေးဖက် ဝင်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများရဲ့ သားအိမ်ကို သန့်စေကြောင်း၊ နနွင်းမှုန့်ကို နေ့စဉ် ဟင်းလျာတွေမှာ စားသုံးလေ့ ရှိတာကြောင့်လည်း အိန္ဒိယလူမျိုးတွေမှာ ဦးနှောက် ဇရာရောဂါ (ခေါ်) အယ်လ်ဇိုင်းရောဂါ ဖြစ်သူဦးရေ လွန်စွာနည်းပါး ကြောင်း
လေ့လာ တွေ့ရှိ ရပါတယ်။
အစာအိမ် အက်ဆစ် အထွက် များသူများ၊ အူယဉ်းနာ ရောဂါ၊ သည်းခြေကျောက်နှင့် သည်းခြေအိတ် ပိတ်ဆို့ သူများကတော့ နနွင်း စားသုံးမှုကို ရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။
Original link - http://health.thithtoolwin.com/2015/09/blog-post_89.html
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတများ, အစားအစာ